Shiinaha DC Isolator Beddel NL1 Taxanaha warshad iyo soosaarayaasha | FEIMAI
• U beddel jirka 4P CB4N ama CB8N
ADELS NL1 Series DC Isolator Switches ayaa lagu dabaqayaa 1-20 KW nidaam deggenaansho ama nidaam sawir-qaadis ganacsi, oo lagu dhejiyay inta u dhexeysa modulladaha wax lagu beddelo iyo kuwa wax rogaya. Waqtiga gelitaanka waa in ka yar 8ms, taasi waxay ilaalinaysaa nidaamka qoraxda mid amaan ah. Si loo hubiyo xasilloonideeda iyo nolosha muddada dheer, alaabtayada waxaa lagu sameeyaa qaybo leh tayo wanaagsan. Max danabku waa ilaa 1200V DC. Waxay haysaa hoggaan aamin ah oo ka mid ah alaabada la midka ah.
NL1 Taxanaha DC Iskuduwaha Is-beddelka
NL1 DC Gooni-goosadyadu waxay si gaar ah loogu talagalay inay beddelaan Direct Current (DC) oo ay ka jaraan ilaa 1200Volts. Naqshaddooda adag iyo awoodda ay u leexan karaan danabyada noocaas ah, xilligan la qiimeeyay, waxay ka dhigan yihiin inay si ku habboon ugu habboon yihiin in loo isticmaalo beddelka nidaamyada Photovoltaic (PV).
Si loo yareeyo fursadaha qaanso faafinta, beddelka NL1 wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda xiriirka wareega. Tan waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo oo lagu jebiyo wareegga iyada oo loo marayo isku xirnaanta laba jibbaar xiriir ah oo tirtiraya markay socoto. Ficil-tirtirka ayaa leh faa iidada dheeriga ah ee ilaalinta wajiyada xiriirka oo nadiif ah taas oo yareyneysa caabbinta wareegga iyo kordhinta nolosha biilasha.
Hore: DC go'doomin Switch PM1 Taxanaha
Xiga: Moodooyinka Gacan-qabashada ee Lever Lockable OFF DC Isolator Switch L1 Series